Uyazi njani ukuba uvinjiwe kwi-Instagram ▷ ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Meyi 2, 2019 0 IiCententarios 1325
Ngethamsanqa, i-Instagram okanye nayiphi na inethiwekhi yentlalo ayibazisi abantu xa bevaliwe. Khawufane ucinge ukothuka kunye nosizi umntu anokuhamba kulo ukuba bebefumene isaziso esithi "i-XYZ ikuvimbile" Owu! Ke ngoko, kuBalandeli abakwi-Intanethi, siza kuchaza Ungazi njani ukuba uvaliwe kwi-Instagram.
Kodwa kuyeza usuku apho siziva ngathi umntu usenokuba usivalile, ngakumbi xa iiposti kunye namabali abo eyeka ukubonakalisa kwi-Instagram feed yethu. Ewe, ngaba oko kuthetha ukuba bakuthintele?
Mhlawumbi akunjalo. Umntu wayenokucima iakhawunti yakhe okanye ayeke ukuthumela kwi-Instagram. Ke yeyiphi indlela ebalaseleyo yokwazi ukuba uvinjiwe?
Ewe, masivumele umdla wakho wokulala ulale kancinci njengoko siza kukunceda ufumane into ebhloko. Ngaphambi kokuba siqale, masicace mhlophe ukuba asizukusebenzisa izixhobo zomntu wesithathu kuba akukho nanye kuzo esebenzayo. Siza kuqhuba kuphela ukukhangela okuthile. Nxiba idyasi yakho yomcuphi masingene ngaphakathi.
IINDLELA ZOKUGQIBELA UKWAZI XA UQINILEKILEYO INSTAGRAM
1. INGXELO YOBOMI NGOKUFUNA
Eyona ndlela ilula yokwazi ukuba umntu ukuvimbile kukukhangela iprofayile yabo ye-Instagram. Khangela igama lakho okanye igama le-Instagram usebenzisa i-Instagram search.
Izinto ezintathu ziya kwenzeka:
1. Ukuba ujonga iprofayile kunye nezithuba, ayizukuvalwa kwimeko yeeprofayili zikawonke-wonke. Kwiakhawunti zabucala, ukuba ubona iprofayili enomyalezo "Le akhawunti yabucala", yonke into ilungile.
2 Ukuba ubona iprofayili kunye nenombolo yezithuba, kodwa indawo ebonisa izithuba ibonisa umyalezo Akukho zithuba, ewe ewe, ibhlokiwe.
3. Nangona kunjalo, ukuba iprofayile ayiveli kukhangelo, umntu uye wacima okanye ubhlokile iprofayile yakhe. Ukuqinisekisa urhano lwakho, kuya kufuneka uphande ezinye iimvavanyo njengoko kuchaziwe apha ngezantsi.
2 CHEBANGELA IMBALI
Xa umntu ekuthintela, i-Instagram ayizisusi izimvo zabo ezindala okanye iithegi kwiprofayile yakho. Ukuba awukwazi ukufikelela kwiprofayile yakho ngokukhangela, kuya kufuneka usebenzise la magqabaza angaphambili ukutyelela iprofayile yakho. Ukuba iprofayili ibonisa inani lezithuba ngaphandle kwezithuba, ewe, livaliwe.
3 FUNA USIZO KU-INSTAGRAM USER NAME
Ungazijonga iiprofayili ze-Instagram ngekhonkco le-Instagram.com/username usebenzisa nasiphi na isikhangeli. Ukuba ukhumbula igama lomsebenzisi lomntu okuvimbileyo (kwaye ndiqinisekile ukuba uyenzile), buyisela igama lomsebenzisi kwikhonkco kunye negama lomsebenzisi elivela kwiprofayili.
Ke, ukuba ungene ngemvume ukusuka kwiprofayili yakho, uya kufumana impazamo "Uxolo, eli phepha alifumaneki" ukuba umntu ulivimbile.
Kukho ithuba elincinci lokuba umntu angazenzi iiakhawunti zabo. Ukuqinisekisa oko, phuma kwiprofayile yakho ye-Instagram kwisikhangeli okanye uvule imowudi ye-incognito kwaye uvule iprofayile yakho ngekhonkco. Ukuba iprofayili iyafikeleleka, iindaba ziyinyani, kodwa ukuba iprofayili ayivulelanga nabo, kulungile.
4 IZIPHUMO ZIYA KULULA
Ukuthintela umntu kwi-Instagram kufihla umsonto wengxoxo kubo bobabini abathathi-nxaxheba. Ke ukuba ukrokrela ukuba umntu othile ukuvimbile, vula iMiyalezo ngqo (DM) kwaye ujonge umtya wengxoxo yabo. Ukuba umsonto wengxoxo ukhona, awuthintelwanga. Kodwa ukuba ilahlekile, usenokuba ukuvimbile. Kodwa kwakhona, umntu wayenokuyicima iprofayile kwaye ngenxa yoko umsonto wengxoxo ulahlekile.
Ukuyiqinisekisa, kufuneka uqinisekise amaqela aqhelekileyo e-Instagram. Vula ingxoxo yeqela apho nina nobabini ningamalungu. Ukuba uyayibona iprofayile yakho kwiqela kwaye hayi kwenye indawo kwi-Instagram, ewe uvaliwe.
5 ZAMA UKUZE UFIQE
Okokugqibela, ukuba ungayibona iprofayili yabo nangayiphi na indlela, zama ukubalandela ngokuthepha iqhosha lokulandela. Ukuba utshixiwe, awuyi kukwazi ukulandela umntu. Ukucofa iqhosha lokuLandela akuyi kwenza nto kwaye uza kubona iqhosha elifanayo kwakhona. I-Instagram ayizukubazisa ngale nto.
Kodwa ukuba khange bakuvimbele, ukucofa iqhosha u-Landela kuzakwenza ukuba ulandele lo mntu kwaye i-Instagram iya kukwazisa. Ndiyazi ukuba unobungozi, kodwa ngamanye amaxesha kuya kufuneka uthathe amanyathelo aqatha.
6 HLUKA KWISIMFU SESIQINISEKILEYO OKANYE AKUFUNDILEYO
Okokugqibela, indlela yokungafuneki kunye nengenabuhlungu kukuqinisekisa kwiakhawunti eyahlukileyo. Ukuba uneakhawunti ezimbini ze-Instagram, vula iprofayile yakho kwiakhawunti yesibini. Kwaye ukuba uneprofayili enye, cela umhlobo wakho osondeleyo okanye ilungu losapho ukuba lifumane iprofayile.
Ukuba iprofayili ivula ngokwesiqhelo, lixesha lokuba ucinge ngezenzo zakho ezimbi ezibangele ukuba umntu azivimbe. * uncumo olubi *
UNOKWAZI NJANI UKUZE UMNTWALA KUKUVULELE KWimbali ye-INSTAGRAM
Ngelishwa, akukho ndlela ngqo yokwazi loo nto. Konke onokukwenza kukujonga kwiprofayili eyahlukileyo. Oko kuyakusebenza ukuba umntu uneprofayile yoluntu. Okona kubheja kwakho kukucela umhlobo. Kuyenzeka ukuba basebenzise inqaku elitsha labahlobo abasenyongweni kumabali e-Instagram.
IZIQINISEKISO ZOKUXELWA NJENGOKUXELWA KUKUFUNDILEKILEYO KWI-INSTAGRAM
Ndiyathemba ukuba ukwazile ukufumana ukuba uvinjiwe okanye hayi kwi-Instagram. Khumbula ukuba ukuba awukwazi ukubona izithuba zomntu, banokuthi bakususe kuluhlu lwakho lwabalandeli kuphela. Yenza itshekhi ephindwe kabini ngaphambi kokuba ubasole ngokukuthintela.
1 IINDLELA ZOKUGQIBELA UKWAZI XA UQINILEKILEYO INSTAGRAM
1.1 1. FUNDA INGXELO YOBOMI NGOKUKHANGELA
1.2 2 CHEBANGELA IMBALI
1.3 3 FUNA USIZO KU-INSTAGRAM USER NAME
1.4 4 IZIPHUMO ZIYA KULULA
1.5 5 ZAMA UKUZE UFIQE
1.6 6 HLUKA KWISIMFU SESIQINISEKILEYO OKANYE AKUFUNDILEYO
2 UNOKWAZI NJANI UKUZE UMNTWALA KUKUVULELE KWimbali ye-INSTAGRAM
3 IZIQINISEKISO ZOKUXELWA NJENGOKUXELWA KUKUFUNDILEKILEYO KWI-INSTAGRAM
Beka i-Instagram yabucala
Amaqhinga ebali le-Instagram